Abwaan Boon Xirsi Oo Ku Geeriyooday Caasimada Somaliland Ee Hargeysa | HAYAAN NEWS
Abwaan Boon Xirsi Oo Ku Geeriyooday Caasimada Somaliland Ee Hargeysa
December 17, 2016 - Written by Mustafe Jannaale
Hargeysa(Hayaannews):Alle ha u naxariiste Xuseen Xirsi Cadib (Boon Xirsi) ayaa caawa ku geeriyooday Caasimada Somaliland ee Hargeysa, kadib markii uu xanuun ku soo booday oo uu muddooyinkii ugu danbeeyey u jiifay.
Sidaa waxa Shabakada Hayaannews u xaqiijiyay dad ehel yihiin Abwaan Boon Xirsi
Boon Xirsi ayaa waxa uu Abwaan, Majaajileyste iyo mufikir,isla markaana ruwaayadaha uu metelayo waxay ahaayeen kuwo aad loo jecleysto.Waxaanu ahaa Abwaan giyiga Soomaalida oodhan laga wada-yaqaano. Boon Xirsi ayaa waxa uu ahaa Majaajileystaha qarnigii 20aad.
Abwaanku wax caruur ah muu dhalin, Bahda Shabakada Wararka ee Hayaannews waxay Tacsi u dirayaan Bahda Fanka iyo Suugaanta, Qoyskii, Eheladii, Qaraabadii iyo guud ahaan shacabka reer Somaliland ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Abwaan Boon Xirsi oo Caawa ku Geeriyooday Magaalada Hargeysa.
Marxuumka ILAAHAY Naxariistii janno ha ka waraabiyo, dhamaanteena Samir iyo iimaan ha innaga siiyo.